Baịbụl n’onwe ya gwara anyị ihe ndị ga-enyere anyị aka ịghọta ihe e dere na ya. Ma ị̀ gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ na ị gụghị, ihe Chineke na-agwa anyị na Baịbụl agaghị ‘esiri gị oké ike, ọ dịghịkwa n’ebe dị anya.’—Diuterọnọmi 30:11.
Kweta n’ihe Baịbụl kwuru. Kweta na Baịbụl bụ Okwu Chineke. Dịrị umeala n’obi n’ihi na Chineke anaghị anabata ndị mpako. (1 Ndị Tesalonaịka 2:13; Jems 4:6) Ma, ọ pụtaghị na a sị gị na ọ dị iri, gị achịrị wụnye n’akpa. Chineke chọrọ ka i jiri ‘ike iche echiche’ gị chọpụta nke bụ́ eziokwu.—Ndị Rom 12:1, 2.
Rịọ Chineke ka o nye gị amamihe. N’Ilu 3:5, Baịbụl sịrị gị “adaberekwala ná nghọta gị.” Kama ịdabere ná nghọta gị, “na-arịọ Chineke” ka o nye gị amamihe ị ga-eji ghọta ihe ị na-agụ na Baịbụl.—Jems 1:5.
Na-amụ Baịbụl mgbe niile. Ị ga-aka erite uru ma ọ bụrụ na ị na-amụchi Baịbụl anya karịa ịna-amụ ya mgbe ọ dabara.—Jọshụa 1:8.
Ị mụchaa otu ihe Baịbụl kwuru gị agafee n’ọzọ. Otu ụzọ ị ga-esi ghọta ihe Baịbụl na-akụzi bụ ịhọrọ otu ihe ma lee ihe Baịbụl kwuru gbasara ya. Ị mụchaa nke ahụ, gị ahọrọkwa ọzọ ị ga-amụ. Buru ụzọ mụọ ndị nke dị mfe. E mechazie gị amụwa ndị nke e nwere ike ikwu na ha bụ maka ndị ‘tozuru okè.’ (Ndị Hibru 6:1, 2) Ị na-eme ya otú a, ọ ga-enyere gị aka iji ihe e dere n’otu amaokwu Baịbụl ghọta ihe e dere n’amaokwu ọzọ, ị ga-ahụkwa otú otu amaokwu Baịbụl si akọwa ibe ya, ọ sọgodị ya ya bụrụ amaokwu ndị “siri ike nghọta.”—2 Pita 3:16.
Gwa ndị ọzọ ka ha nyere gị aka. Ihe e dere na Baịbụl na-egosi na anyị kwesịrị ikwe ka ndị ọzọ nyere anyị aka ịghọta ihe dị na Baịbụl. (Ọrụ Ndịozi 8:30, 31) Ndịàmà Jehova na-agwa ndị mmadụ ka ha na ha na-amụ Baịbụl na-anaghị ha ego. Ha na-eji amaokwu Baịbụl dị iche iche enyere ndị mmadụ aka ịghọta ihe Baịbụl na-akụzi otú ahụ Ndị Kraịst oge mbụ mere.—Ọrụ Ndịozi 17:2, 3.
Inwe oké amamihe ma ọ bụ ịgụ oké akwụkwọ. Ndịozi iri na abụọ Jizọs ghọtara ihe dị n’Akwụkwọ Nsọ ma kụziere ya ndị ọzọ n’agbanyeghị na ụfọdụ ndị weere ha ka “ndị na-agụghị oké akwụkwọ na ndị nkịtị.”—Ọrụ Ndịozi 4:13.
Ego. Ọ gaghị efu gị ego iji mụta Baịbụl. Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Unu natara n’efu, na-enyenụ n’efu.”—Matiu 10:8.